Pacman နှင့်စုစည်းမှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်နည်း Linux မှ
မင်္ဂလာပါ၊ ဒီတစ်ခါတော့သင့်အနေနှင့်သိကောင်းစရာအနည်းငယ် (များစွာသောသိပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်)၊ ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်ဒီတာကိုအခြေခံပြီး distros များကိုသုံးသောလူများစွာ Pacman ပိုဆိုးတာကသူတို့သိမှာမဟုတ်ဘူး။ compile လုပ်ဖို့တစ်ခုတည်း kernel ကိုအသုံးပြုနေသည်.
အထူးအကြံပြုလိုပါတယ် ဖတ်ပါ "စုစည်းမှုအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား" အရူးနှင့်ရီစရာပြုစုမီ
2 /etc/makepkg.conf ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ပါ
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့တွင်ပရိုဆက်ဆာမည်မျှရှိသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည် (ကျွမ်းကျင်သူအများစုကကြောက်စရာမလိုပါ၊ ချည်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပရိုဆက်ဆာများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုများရှိသော်လည်း makepkg သည် execute thread များကို parameters အဖြစ်အသုံးပြုသည်) ကျွန်ုပ်တို့တွက်ချက်ရန်အတွက်
lscpu | grep '^ CPU များ (များ):'
[x11tete11x @ Jarvis ~] $ lscpu | grep '^ CPU (s):' CPU ကို (s): 8 [x11tete11x @ Jarvis ~] $
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရိုဆက်ဆာများကိစ္စတွင်ဖြစ်သည် Intel က နှင့် HyperThreading ဒါ့အပြင်ကွပ်မျက်၏ချည်ပြသထားတယ်။
ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်သည် /etc/makepkg.conf makepkg ကိုရရှိနိုင်တဲ့ပရိုဆက်ဆာအားလုံးကိုသုံးဖို့ပြောတယ်။ ဒီ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဝီကီအရသိရသည် Gentoo၊ လုပ်ဆောင်ရမည့်အလုပ်အကိုင်ပမာဏမှာအောက်ပါအကောင့်မှဖြစ်သည်။
ပရိုဆက်ဆာ + HT (HiperThreading Intel မှထောက်ပံ့ပါ) + ၁
ကျနော်တို့လိုင်းပြုပြင်မွမ်းမံ MAKEFLAGS (uncommenting ) သက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးနှင့်အတူ ငါ့ကိစ္စမှာတော့ ဒါနဲ့တူလိမ့်မယ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြောင်းအလဲများနှင့် voila များကိုသိမ်းဆည်းပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ packet များကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ distros များအတွင်း၌ cores အမျိုးမျိုး သုံး၍ စုဆောင်းနိုင်သည် Pacman
နောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့်“ simplescreenrecorder” သည်စီတစ်ခုစီ၌မည်သို့စုစည်းထားသည်ကိုသင်မြင်နိုင်သည့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုအားပူးတွဲတင်ပြထားသည်။ အလှဖန်တီးရှင်များ (MAKEFLAGS = » - j9″) နှင့်နှင့်မပါဘဲ တံဆိပ်များ (#MAKEFLAGS = » - j9″):
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Pacman နှင့်စုစည်းမှုကိုအရှိန်မြှင့်နည်း
ငါတို့မြို့တွင်“ ရှာလကာရည်” ဟုငါဆိုလိုသည်မှာအလွန်ကောင်းသည်
ငါ့မှာ cores ၄ ခုရှိတယ်၊ ၄ ရတယ်၊ ငါ ၅ ကိုမှန်အောင်ထားရမယ်လို့ထင်လား။
စကားမစပ်၊ makekpg.conf ကိုပြင်ပါ၊ သင်သည် copy / paster အရူးမဟုတ်ပါက makepkg.conf ဖြစ်သည်။
Pacman စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ !!!! 😛
ငါ xD နည်းနည်းအမှားကိုမြင်လိုက်ပြီးယောက်ျားတွေကို xD ကိုပြင်ပေးပြီးပြီ
ထိထိရောက်ရောက်၊ မင်းကိစ္စမှာ5xD ဖြစ်မယ်။
ငါသည်သင်တို့ကိုဤဆောင်းပါး xD hahaha ကြိုက်နှစ်သက်သွားခဲ့ကြသည်သိတယ်
distros နှစ်ခုလုံးတွင်တူညီသော Firefox ပရိုဖိုင်းကိုအသုံးပြုရန်အားလုံး။ 😛
ငါ BFS ကိုအသုံးပြုလျှင် (ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုသင်မသိလျှင်၎င်းကိုသင်မသုံးပါ) အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို cores အရေအတွက်ဖြင့်ရရှိပြီးမည်သည့်အရာမျှထပ်မံထည့်သွင်းစရာမလိုတော့ဟုမှတ်ချက်ပေးရန်ဤအခွင့်အရေးကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သူကငါ့ကို "2" ရှိသည်ငါ့ကိုပစ်လျှင်ငါ3မှန်ကန်သော?
ငါ fuck ဆိုတဲ့မင်းကိုငါချစ်တယ်၊ မင်းဆောင်းပါးတွေရတဲ့အခါငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ အခုငါအသုံးပြုနေတယ်။
conky ကကျွန်တော့် i4 ပေါ်ရှိ thread လေးခုစလုံးဟာ ၁၀၀% ဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးတည်းဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျွန်ုပ်မှာ Thread တစ်ခုသာ configure လုပ်ထားတယ်လို့ငါ့ကိုပြောလိုက်တယ်။ ဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် kernel ကိုယခုချက်ခြင်းပြုစုသည်။ မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကြည့်ကြစို့။ v
Yoyo ကိုငါသဘောတူတယ်၊ ငါ့မြို့မှာအဲဒါကို“ ရှလကာရည်ထဲမှာဒစ်” လို့မပြောပါဘူး !! အဖြစ်မကြာမီငါအိမ်ပြန်အဖြစ်ငါကြိုးစားပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ post မှာ Debian အတွက် Kernel ကိုဘယ်လိုလက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ ၅ ခုရှိတာသိတယ်
သူကပြောတယ်ကားတစ်စီး spamero xD hahaha
စိတ်မပူပါနဲ့၊ ကျွန်တော့်ကိုသူရဲ့ banhammer ရဲ့အမြင်အာရုံထဲမှာကြည့်ပြီးပါပြီ။
"My banhammer" <3 သင့်ရဲ့အငွေ့တွေကိုလျှော့ချဖို့မင်းကိုလည်းငါမထိုးခိုင်းဘူး
ဒီမှာထွက်သွား, မုန်လာဥ ဦး ခေါင်း, ဆက်လုပ်သို့မဟုတ်ငါတုတ်ရလိမ့်မယ်။
ဟားဟား .. ငါ gosh ငါဒီအသိုင်းအဝိုင်းကိုချစ်တယ်။
Ccache သည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်စုဆောင်းမှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ယခင် compilation လိုအပ်သည်။
ccache သည် gentoo အသုံးပြုသူများကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် archive ၏စုစည်းခြင်းမှအလယ်အလတ်တန်းစားဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည်၊ ၎င်းသည်နောက် executable ကိုများစွာမြန်ဆန်စေသည်။ အသုံးချပရိုဂရမ်တီထွင်သူများနှင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် kernel ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တည်ဆောက်ပြီးမွမ်းမံသူများအတွက်လည်းအသုံးဝင်သည်။
ccache သည် compilation cache ဖြစ်သည်။ သင်က၎င်းကိုစတင်လုပ်ဆောင်သည့်အခါသင်ပထမ ဦး ဆုံးပြုလုပ်သောကြာချိန်သည်ကြာရှည်သင့်သည် (အကယ်၍ Java, Firefox နှင့် LibreOffice တို့ရှိလျှင်သင်၏ဟာ့ဒ်ဝဲအလွန်မစွမ်းနိုင်လျှင်နာရီအနည်းငယ်စုစည်းရန်သေချာသည်), သို့သော်ဒုတိယပြုစုသည် ccache သည် compiler လုပ်ထားသောအရာအများစုသည်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ compilation အချိန်ကိုလျှော့ချပေးသောကြောင့်ထို software နှင့်အတူတူပင် (version တူညီသည်၊ ၎င်း၏ compilation options များသို့မဟုတ် patch များအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ) ပိုမိုမြန်ဆန်လိမ့်မည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်ပြproblemsနာများ (Gentoo Wiki တွင်သတိပေးထားသည့်အချက်များကြောင့်မဟုတ်ပါ) နှင့် FirefoxOS စာရင်းတွင်လည်းသူတို့လုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင် cache လုပ်လိုလျှင်တူညီသော version ဖြင့်ပြုလုပ်ပါကသင်အခြားတစ်ခုကိုသွားလျှင်၊ cache ကိုရှင်းလင်းပါ။ ပြန်စတင်ပါ။
ငါ Arch ထဲမှာတစ်နှစ်ခွဲလောက်ရောက်ခဲ့ဖူးပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
luis စတုရန်း ဟုသူကပြောသည်
ငါဒီ option ကိုခဏသုံးထားတယ် (သူပစ်လိုက်တဲ့နံပါတ်က ၄ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါဆို #MAKEFLAGS = » - j4 remains)
ဒါပေမယ့်ငါအချို့ပရိုဂရမ်များကို update လုပ်သည့်အခါ CPU သည် ၁၀၀% အထိရောက်သွားပြီး၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်နေစဉ်အခြားပရိုဂရမ်များကိုအသုံးပြုရန်ခက်ခဲသည်ကိုသတိပြုမိသည်။
ငါအကြားတစ်ခုခုလုပ်နိုင် ?? ဥပမာ #MAKEFLAGS = » - j3″ ???? သို့မဟုတ်ပါကအလယ်မြေပြင်မရှိဘဲပေါ်သို့မဟုတ်ပိတ်ကြောင်းတစ်ခုခုလား?
Luis Square ကိုပြန်ပြောပါ
လူးဝစ်ဟုတ်ကဲ့၊ သင်သည် jj ကိုပြproblemsနာမရှိဘဲထည့်နိုင်သည်။ ထို parameter သည်မည်မျှ«ချည်များ»တွင်သတ်မှတ်သည် (အသေးစိတ်ကိုမရှင်းပြရန်၊ ချည်သည်သင်မည်သည့်«အပြိုင်အပိုင်းအစများ»တွင်သင်လုပ်ဆောင်သည်ကိုဆိုပါစို့။ သငျသညျလုပ်ဖို့သွားကြသည်) ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်
ပြီးပြည့်စုံတယ်၊ အခုငါထားလိုက်ပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဟောင်း
XBMC သည်၎င်း၏အမည်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီ၊ ယခု Kodi ဖြစ်သည်
DebConf14 - Debian Developer Conference မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲ